သံစဉ်လှိုင်း: January 2008
Vocalist: ဟန်ထွန်း + ပိုးရည်
အချိုဆုံးမင်းရဲ့ အပြုံးလေး စိမ့်ဝင်
အိုးး မင်းမရှိရင် မပျော်ဘူး
မင်း အနားပဲ နေချင်ဆုံးပဲ
ဒါ ရင်ထဲက စကားလေးတွေ
ငါတို့ စွဲလမ်းခြင်းနဲ့ အသက်ရှင်မယ်
အချစ်လေး တို့ရဲ့အဖြစ်က မေ့ရန်မလွယ်
အကြင်နာများ စာနာ ဖြည့်စွမ်းတဲ့အခိုက်
ရင်ကို စီးဝင် နစ်မျောသွား
အတူတွဲလို့ရှိနေမယ် အချစ် မနေခဲ့နဲ့
မင်းအနားပဲ အနေချင်ဆုံးလေး ...
မင်းအနားက အဝေးမသွားနိုင်ပါ ...
Posted by Winkabar at 8:55 PM No comments:
Labels: ပိုးရည်, ဟန်ထွန်း
Song: မြန်မာပြည်ကို လွမ်းသည်
မြန်မာပြည်ကို လွမ်းနေကြတဲ့ ပြည်ပရောက်မြန်မာများအတွက် ဒီသီချင်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ........................
Posted by Htet Arkar Soe at 2:45 AM No comments:
ကျားပေါက် - ဒုတ်ခရောက်ပြီ
ဒီသီချင်းက ကျားပေါက်ရဲ့ အိပ်ရာဝင်သီချင်းများ အခွေထဲကပါ.
Vocalist: Glukoza (Глюкоза)
နောက်တပုဒ်အနေနဲ့ အဆိုတော် ဂလူးကို့ဇာ ရဲ့ နှင်းတွေကျနေတယ်….ဆိုတဲ့သီချင်းကို ဘာသာပြန်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တက္ကစီတွေကလည်း ကြောင်ပေါက်ကလေးတွေ ခြေထောက်ကို
ငါ ကားထဲမှာထိုင်နေရင်းနဲ့ အသံရှည်ဥသြသံတွေကို ကြားနေရတယ်။
အရူးတစ်ယောက်လိုပဲ ထထိုင်ပြီးတော့ မင်းကိုစောင့်နေမိတယ်၊
နှင်းမှုန်းလေးတွေကို ပါးစပ်နဲ့ဖမ်းပြီးစားရတာ အရမ်းကြည်နူးဖို့ကောင်းတယ်
မင်းမရှိတဲ့ ညနေခင်းတွေမှာ ငါ အဲသလို လုပ်ခဲပါတယ်။
မင်းဆီကိုလာဖို့ လမ်းကိုလည်း ငါသိလား၊မသိဘူးလား
Posted by ဇနိ at 4:01 AM No comments:
ပြန်တွေးလိုက်တိုင်း မင်းနားနား ရောက်လာ
သူစိမ်းတွေ ကြားမှာ လှုပ်ရှားရင်းနဲ့သာ
တို့ နှစ်ဦးရည်မှန်းတာ ကိုယ်မျှော်လင့်ဆဲပါ
ရေမြေခြား သွားရတော့ မင်းလေးကို ထားခဲ့ရပြီပေါ့
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အတွက်တော့ ယုံကြည်ပြီး စောင့်နေပါနော်
လွမ်းရက်တွေကို တဖြည်းဖြည်း ဖြတ်ကျော်မှာ
ကိုယ် ..... ဟိုး အဝေးမှာ နေတဲ့အခါ မျက်ဝန်းတွေထဲ မင်းပဲမြင်
အချစ်ဆုံးသာ ကိုယ့်အနား ရှိစေချင်
ဤ မှန်ကန်သော တိုင်တည်ထားကိုယ့်သစ္စာ ဆုတောင်းပြည့်ခဲ့ရင်
အချစ်ဆုံးသာ ကိုယ့်အနား ရှိ စေ ချင်
Lyrics from: http://lyric.pikay.org/
Posted by Winkabar at 8:53 PM3comments:
နေတာ အချိန်တွေ ကြာလာလေ တွယ်တာတွေ ပိုလာလေ
ရင်မှာ တစ်ဦးအပေါ် တစ်ဦးမှာလေ
အနီးနားက မင်းလေး မြင်အောင် ဖွင့်ပြောဖို့လေ
နေတာ အချိန်တွေကြာလေ ရင်ခုန်သံမြန်လေ/ ရင်ခုန်ခြင်းများနဲ့
အကြင်နာ အချစ်တွေ ဖြစ်ပေါ်နေ
သိရက်နဲ့ မင်းလေး ဟန်ဆောင် နေဦးမလားလေ
နီးစပ်ခွင့်ပေးပါ ငယ်သူငယ်ချင်း/သူငယ်ချင်း အချစ်လေး
မကြာခင် ပြန်ဆုံပါရစေ တို့ ဆုတောင်းရင်းလေ
စိတ်ထဲမှာ မှန်းမျှော် ပြန်ပြီးတွေး
ဘယ်သူ အကြင်နာဆုံးလဲ အတိတ်ကို
အို ... မြင်နိုင်မယ်ဆို အို ... လှမ်းလို့ လာခဲ့လေ
ပန်ဆင်ဖို့ ပန်းလေးလို ပွင့်လန်းနေ
မပန်ချင်လည်း နှလုံးသားကို ချွေလိုက်လေ
မြေမှာ ပန်းပွင့်လေးတွေ ကြွေကာ လမ်းခင်းပေးနေ
လာမှာလား မင်းအတွက်ဆိုရင်လေ/ မင်းကို တမ်းတနေ
လာမှာလား မင်းအတွက် ဆိုရင်လေ .....
Posted by Winkabar at 8:51 PM No comments:
Vocalist: L လွန်းဝါ
မင်းအနား နေနိုင်ချိန်လေး ရှိနေခိုက် ဂရုစိုက်မိခဲ့သူ
မင်းမျက်ဝန်း ကြင်နာတွေလည်း ရှိနေခိုက်
နင် ငါ့အပြစ် ခွင့်လွှတ်လည်း အခုအချိန်မင်းအနားမှာ
ပြန်မလာတော့ ငါ လိပ်ပြာ မလုံဘူး
မင်း ထားခဲ့လိုက်ပါ ငါလေ အရမ်းချစ်ခဲ့လည်း
မင်း အနား ပြန်မလာတော့ ငါ လိပ်ပြာ မလုံဘူး
မင်းထားခဲ့လိုက်ပါ ဒါဟာ ငါ့အတွက် တစ်သက်စာ အလွမ်းများ
ဝေးလွင့်ပြီးမှ မင်းရဲ့ အနား မလာတော့ဘူး ခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့
မင်းက စောင့်နေလည်း သံယောဇဉ်လေးတွေ မဆုံးပေမယ့်
နီးစပ်ဖို့ အခွင့်အတွက် ဒီအချိန်မှာ မင်းအနား
Posted by Winkabar at 8:46 PM No comments:
Labels: L လွန်းဝါ
မဆုံနိုင်တဲ့ အကြောင်းလေး ရှိခဲ့ကြတော့
တစ်နေ့နေ့ အသင့်ဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ပါ့မယ်
အကြင်နာ ဇာတ်လမ်းလေး အလွမ်းပြောင်းရေးဖို့
သွေးနည်းနည်း အေးအောင် အချိန်ပေးပါဦးကွယ်
ကျန်နေခဲ့မှာ တွေးရုံနဲ့ ဆွေးတတ်ခဲ့
တကယ့်ဘ၀ကို အခု ရင်ဆိုင်ဖို့ ခက်တယ်
လှုပ်ခတ်လို့ သွားအောင် လာ ပြုစားတယ်
ယူလာတဲ့ အယုအယ စက်ကွင်းလေးထဲက
တိုးထွက်လို့ မရအောင် ဆွဲညှို့လို့ထားတယ်
ကျန်နေခဲ့မှာ တွေးရုံနဲ့ ကြေကွဲတတ်တော့လည်း
တကယ့် ဘ၀မှာ တို့တွေ ဘယ်လို စိမ်းရမှာလဲ
မလွမ်းရဲသေးဘူး မောင်ရယ် ခဏနဲ့ မထားခဲ့ပါနဲ့
တို့ အသည်းလေး နုနုနယ်နယ် ထိခိုက် ကွဲအက် လွယ်တယ်
လွမ်းရုံလေးနဲ့ နွမ်းမယ် ထင်ပါရဲ့ သိပ်ချစ်တော့ကွယ် .....
ကိန္နရာ ချောင်းခြား သီချင်းလေး ကြားတိုင်း
ထိန်းချုပ်လို့မရပါ တို့ မျက်ရည်ဝဲတယ်
ဘယ်လို ချစ်သွားလဲ ဘယ်ထိ ချစ်ရမလဲ
၀ူး ..... အား .....
တစ်နေ့နေ့ အသင့်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရဦးမယ်
Posted by Winkabar at 8:40 PM No comments:
* ရှင်သန်ရာ အချိန်လေးတော့ မင်းရဲ့ အနား နေချင်လို့ပါ
အတူတူဆို အိပ်မက်တိုင်းဟာ တို့ရဲ့ ကမ္ဘာ
သံသရာအဆုံး ကမ္ဘာမြေအဆုံးထိ မခွဲချင်ဘူး
**ကိုယ်နေချင်တာက မင်းရဲ့ အနား
ကိုယ်လိုချင်တာက မင်းရဲ့ အချစ်များ
ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀အမှတ်တရ ကိုယ့်ရဲ့ဘ၀ ထာဝရ
ကိုယ့်ရဲ့ ဘ၀မှာ တကယ်မရှိချင်တော့လို့ပါ
လူတွေ အပြင်မှာ ပြောတဲ့စကား
ကိုယ်တို့နှစ်ယောက်ဟာ ကမ္ဘာမှာ တကယ်အဓိကမဟုတ်လား
မခွဲတမ်း နေချင်တာ မင်းအနားနား)၂
Posted by တော်ကီ at 10:00 AM 1 comment:
Labels: မျိုးကျော့မြိုင်, ဖြူ
Vocalist: Group - Diskoteka Avariya
ကျတော် ဒီဘလော့(ဂ်)မှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ အခုမှပဲ သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို စတင်ဝေမျှဖြစ်ပါတယ်။
ရုရှားဘာသာကနေ ကျနော်တတ်နိုင်သလောက် အဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပြီး ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။
အခု Diskoteka Avariya အဖွဲ့ဟာ ရုရှားနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးအဖွဲ့ပါပဲ။ နောက်လည်း ရုရှားသီချင်းတွေ အဆင်ပြေရင် ဆက်လက်တင်ပါဦးမယ်။ အားလုံးပဲ နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်၊လူသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်ကြပါစေ။
ဒါမှမဟုတ် ငါမင်းကိုအော်ခေါ်တာ မကြားလိုက်တာလား။
ကြည်နူးဖွယ် အပမ်းဖြေကမ်းခြေကအကြောင်းတွေပဲ အိပ်မက်မက်နေပါတော့။
မင်းက ထားခဲ့မယ်လို့ စဉ်းစားရင်
စိတ်လှုပ်ရှားစွာပဲ နာရီကိုငေးရင်း ဘယ်သူနဲ့အတူ မင်းရောက်လာမလဲ...
နေ့တိုင်းပဲ ဘ၀ဆိုတာမင်းနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းထားတာပါ၊
နေထိုင်စရာအဆင်သင့်နဲ့ ငါဘ၀ကို မင့်အတွက်လက်ဆောင်ပေးပြီးသားပါ
ငါပဲ တစ်သက်လုံး အိပ်မက်နေရမလား
မနက်ခင်းရောက်ရင် တခုခုတော့ ညာစကားပြောခဲ့ပါဦး။
တို့တွေ မြင်းဖြူတွေစီးပြီး ဟိုးအဝေးပျံသန်းသွားနိုင်တာပေါ့၊
မနက်ခင်းရောက်ပြီလေ တခုခုတော့ ညာစကားပြောခဲ့ပါဦး။
တို့တွေ မြင်းဖြူတွေစီးပြီး ဟိုးအဝေးပျံသန်းသွားနိုင်တာပေါ့
ты думаешь остаться, -
позабыли на лестнице:
На часы возмущенно глядит тот, что пришел с тобой.
шум на улицах смолкнет.
Люди бредут домой,
с тобой останется тот, кому улыбаешься ты!
стихи все, куплеты, поэмы написаны.
на ток-шоу облизаны.
Остается лишь слово -
жить любимым тобой!
заправляя постель, жизнь дарить с тобой,
Шум на улицах смолкнет,
Эту мелодию тебе, может быть,
напоет шум дождя, -
просто обернись уходя:
может, это я кричу тебе, но ты меня не слышишь!
тебе в другой район,
пусть будут все шептаться -
утром что-нибудь соврем.
наступит утро, - что-нибудь соврем.
ты что-нибудь забудь, -
Posted by ဇနိ at 10:59 AM No comments:
Labels: Diskoteka Avariya
နေ့သစ်ကို နားထောင်ပြီး နေ့သစ်များကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ။
အချိန်ဆိုတာ လူကိုမစောင့်ဘူးလေကွယ် …
ဒီနေ့သစ်ဟာ တို့ကို မျှော်လင့်ခြင်းအသစ်တွေပေးလာမယ် …
ငှက်တောင်မှ သာယာတဲ့သီချင်း ရွေးတတ်တာပဲ
ဒီနေ့သစ်ဟာ တို့ကို အင်နဲ့အားအသစ်တွေ ပေးလာမယ် …
ညအမှောင်ရယ် အိပ်မက်ဆိုးက နိုးလာပြီ
ဒီနေ့သစ်ဟာ တို့ကို အောင်မြင်မှုအသစ်တွေ ပေးလာမယ် …
Posted by တော်ကီ at 6:49 AM 1 comment:
၂၀၀၈ ခုနှစ်ဟာ မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဆန္ဒပြည့်ဝတဲ့နှစ် ဖြစ်စေဖို့ အကျင့်ဆိုးတွေကို ဖျောက်ဖျက်ပြီး အများကောင်းကျိုး ဒီထက်မက သယ်ပိုးဆောင်ရွက်နိုင်ကြပါစေ။ ဒီသီချင်းကို နားထောင်ပြီး ကျက်သရေ မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ခညောင်းကြပါစေ။ :D
* အလုပ်လုပ်ရာဝယ် အစကသာရယ် အဆုံးထိအောင်ပင် မကျန်ချင်တယ် အားလျော့တာရယ် ပေါ့လျော့တာရယ် အဲဒါ အကျင့်ဆိုးတယ်။ အို … တစ်ယောက်က ဒီလို တစ်ယောက်က ဟိုလို အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဂုဏ်ပြိုင်တယ်။ နည်းလမ်းအပိုတွေ စည်းကမ်းမရိုသေ ရက်တွေ ကုန်ခဲ့တယ်။ ဒီလို အကျင့်ဆိုး စိတ်မျိုးထားလို့ သံသရာရှည်လာတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကွယ် ကောင်းအောင်မထူး မနောကကွယ် ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးတည်း ပြောသမျှနာခံတယ်။
** ငယ်သူဟာ နည်းလမ်းမှားကာ အကြီးအကဲများကို မရိုသေတယ်။ ရွယ်တူရင် အသင်းအပင်းဖွဲ့နှောင် အချင်းချင်း တည့်အောင် မပေါင်းကြတယ်။ သေချာစွာ နောက်တစ်ထစ်မှတ်ဖွယ် ကောက်ကျစ်တတ်တယ် ၀ါသနာရယ် ဂုဏ်ပါဝါ မိုးလောက်မကရင် ကိုယ့်အောက်ကလူ နှိပ်စက်တယ်။ သူလုပ်တော့ အရာရာမတွင်ကျယ် အများတကာလုပ်တော့ ရှုပ်ဖို့ ကြံတတ်တယ် အာကျယ်တာတွေရယ် စည်ပင်တိုးစေ အမျိုးမတိမ်ကွယ် ဒီအကျင့်ဆိုးတွေ ချိုးနှိမ်ကာ ဖျောက်ကွယ်။
*** အလိုက်မသိတာတွေရယ် ကိုယ့်အဖို့တော့ ကိုယ်သိတယ် နောက်လူတော့ မသိပါရယ် ဒီအကျင့်မျိုး အလွန်ဆိုးတယ်။ ရှေးစကားတွေကိုပယ် ခေတ်အလိုက်တော့ သူနားမလည်။ ဆရာ့ကိုလည်း ပစ်ခါပယ် ဒီအကျင့်မျိုး အလွန်ဆိုးတယ်။ ကမ္ဘာမှာလည်း ခေတ်မီဖွယ် ကမ္ဘာမှာလည်း ခေတ်မီဖွယ် မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုတကယ် ဒီသီချင်းတေးဟာ ပြည်တွင်းရေးပါ ဒီသီချင်းတေးသံ မနှေးပဲ ပြုပြင်မယ်။
Posted by တော်ကီ at 3:52 AM No comments: